Senior Archives - Glory Assumption Space
၁) Senior Accountant – Female – (5) Posts/လစာ - ၄၅၀,၀၀၀ ကျပ်/လှိုင်မြို့နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GASနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောDistribution Co.Ltd တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ [caption id="attachment_3639" align="alignnone" width="600"] Young Asian manager working on computer[/caption] - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - LCCI Level III /ACCA Part II ပြီးမြောက်ထားရမည်။ - MYOB Software /Peachtree Software အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - Computer Word,Excel,Internet & Email အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - Advanced Excel အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံ ( ၂ ) နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - လှိုင်မြို့နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံတစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါကဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223785, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
၁) Senior Accountant – Female - (5)Posts/လစာ - ၄၅၀,၀၀၀ကျပ်/တောင်ဒဂုံမြို့နယ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Media & Advertisting Co.,Ltd တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ ၁) Senior Accountant – Female - (5)Posts/လစာ - ၄၅၀,၀၀၀ကျပ်/တောင်ဒဂုံမြို့နယ် - ဘွဲ့ရ ဖြစ်ရမည်။ - Account နှင့် ပတ်သက်သည့် ဘွဲ့(သို့မဟုတ်) Diploma ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - လစဉ် financial report များကိုတိကျမှန်ကန်စွာရေးဆွဲတင်ပြနိုင်ရမည်။ - လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံ (၃)နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။ - အသက် ၂၅ နှင့် ၃၅ ကြားရှိသူဖြစ်ရမည်။ - သာကေတ၊သုဝဏ္ဏ၊တောင်ဒဂုံ၊မြောက်ဒဂုံ၊ဒေါပုံ၊ယုဇန၊သင်္ဃန်းကျွန်း၊တောင်ဥက္ကလာ၊ မြောက်ဥက္ကာလာ၊ရွာသာကြီး တွင်နေထိုင်သူကိုဦးစားပေးမည်။ - လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု့နှင့်အတွေ့ကြုံပေါ်မူတည်၍လစာညှိုနှိုင်းနိုင်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံတစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09977397705, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Senior Account – Female (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Restaurant တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ Senior Account – Female (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် နှင့် လမ်းစရိတ်ကြေး + ရက်မှန်ကြေး + % ကြေး+တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်။
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၃၀) ထက်မကျော်ရ။ - LCCI Level III အောင်မြင်ထားသူ ဖြစ်ရမည်။ - Computer Word, Excel, Internet & Email ကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - Advance Excel အား ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၅)နှစ်ရှိရမည်။ - လချုပ်ဆွဲနိုင်ရမည်။ - ရှမ်းအစားအသောက်ဆိုင်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ - စားသောက်ဆိုင်တွင် Account အပိုင်းဖြင့်အတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ - ရုံးပိတ်ရက် တစ်ပတ်တစ်ရက်ပိတ်သည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံ ကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင် တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Senior Account – Female (5)Posts /လစာ - ၄၅၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Garment တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Senior Account – Female (5)Posts /လစာ - ၄၅၀,၀၀၀ ကျပ် /မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်။
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - Account ပိုင်းဖြင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - LCCI Level3ပြီးထားပီး ၊ အခွန်အကြောင်းနားလည်သူ ၊ Audit ပိုင်းနားလည်သူဖြစ်ရပါမည်။ - အသက် (၃၀) ဝန်းကျင်ဖြစ်ရပါမည်။ - စနေ နေ့တစ်ဝက်ပိတ်ပြီး တနင်္ဂနွေ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Senior Account- Male (5) Posts
Location in : စစ်တွေ
1. Senior Account –Male (5) Posts/Salary- 400,000 Kyats/Sittway Township. - B.com ဖြင့်ဘွဲ့ရသူဦးစားပေးမည်။ - Account ပိုင်း နှင့် Experience (၂) ရှိရမည်။ - LCCI Level III ပြီးမြောက်ရမည်။ - အသက် ၃၀ ၀န်းကျင်ရှိရမည်။ - နေစရိတ် စားစရိတ် စီစဉ်ပေးမည်။ - စစ်တွေတွင် (၁) နှစ်နေရမည်။ - ၃လ ၁ကြိမ်ပြန်ခွင့်ရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Senior Accountant(AR/AP/Stock) - Male /Female (5) Posts
********************** URGENT REQUIREMENT ************************* မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ 5. Senior Accountant (AR/AP/Stock) -Male/Femal(5)posts/Salary – 500000Ks/Dagon Township. -B.Com (or) LCCI Level (III) အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ -MYBO Software ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။Trading ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ အိမ်ထောင်မရှိသူဖြစ်ရမည်။ လိုအပ်ပါကအချိန်ပိုဆင်းပေးနိုင်သူရမည်။ -စည်းကမ်းပိုင်း (ငွေကြေး ၊ စာရင်းဇယား) နှင့်ပက်သက်၍တိကျသေချာစွာဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ Under Pressure တွင်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းသွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Senior Accountant - Female (5) Posts
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1. Senior Accountant - Female (5) Posts / Salary 400000 Kyats / Tarmwe Township Requirements - B.Com,LCCI Level III ,Account Software - Experience3Years ရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 4. Senior Accountant – Female (5) Posts / Salary 500,000 Kyats / Kyeemyindaing Township Requirements - Graduate with any degree. - Minimum3year’s experience in accounting field, preferable of trading business. - Fluent in English. - Proficient in MS Office Software (Word ,Excel), E-mail. - Able to work under pressures and challenging situations. - Able to work overtime if required. Responsibilities - Calculate and track product costs. - Establish budget policies and procedures to control expenses. - Review cost of sales and operating expreses. - Report and analyze product costs and expenses. မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Accountant Female (10) Posts --- Any Graduate. --- LCCI I, II, III. --- Experience 1 (or)2Years. --- Computer MS ( Word, Excel ) ကျွမ်းကျင်ရမည်။ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ --- အခန်း ( ၁၀၄ ) ၊ တိုက် ( ၆ ) ၊ အင်ကြင်းမြိုင်အိမ်ရာ ၊ ဗိုလ်ချို ၁ ရပ်ကွက် ၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဆက်သွယ်ရန် Phone No; --- 09-262223783, 09-970539386, 09-262223784, 09-977125251, 09-262555438, 09-263121101. E-mail ဖြင့်လျှောက်ထားလိုပါက _ hr1@gloryassumptionspace.com, hr3@gloryassumptionspace.com, hr5@gloryassumptionspace.com.
Senior Accountant (F)-1Post
-ဘွဲ့ ရဖြစ်ရမည်။ -LCCI- I,II,(III) -Basic English Speaking -Microsoft ( Word,Excel)
Senior Accountant (F/3 Posts)
-B.Com -LCCI II (or) III -Experience 1 year -Accounting Software တစ်ခုခုကိုကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူကို ဦးစားပေးမည်။ -စကားပြောပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။
Senior Auditor (M/3 -Posts)
-B.Com -LCCI level II (or ) III -Experience over 1 year -COMPUTER ( Microsoft Word, Exel, Power Point, INTERNET & EMAIL, Graphic Design).
-B.Com ,LCCI level (II or III) -(2) Years working experience in the field of Construction Accounting